Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow - BBC News Somali
Image caption Dastuurka Somalia
Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka.
Su'aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Dhinaca kale qaar ka tirsan odayaashii dhaqanka Puntland ee ka qaybgalay kulankii furitaanka shirwaynaha Isimada Somaalida ee Muqdisho ka dhacay ayaa dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garowe iyagoo sheegay inay saluugeen hanaanka ay wax u socdaan. Odayaashu waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen wadatashi inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata inay ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee ka socda Muqdisho.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah.
Safiirada qaramada midoobay u fadhiya dalalka USA, UK, France iyo Germany iyo ergeyga UN ee somalia iyo madaxweynaha dawladda KMG ee somalia intuba waxay isku raaceen in taageerada caalamku ay shardi u tahay sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka August.